ကိုထွန်းဝေ စာမျက်နှာ : သမ္မတ- အိုဗားမား မြန်မာပြည်ခရီးစဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး မြန်မာပြည်သူများမှ သွားရောက်ကြိုဆိုပြီး အိုဗားမားထံ အိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့စေလို
သမ္မတ- အိုဗားမား မြန်မာပြည်ခရီးစဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး မြန်မာပြည်သူများမှ သွားရောက်ကြိုဆိုပြီး အိုဗားမားထံ အိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့စေလို
မြန်မာနိူင်ငံရှိပြည်သူများနှင့် မြန်မာ့နိူင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူများမှ အမေရိကန်နိူင်ငံ၏ စက္ကူအလံငယ်လေးများကိုင်
ဆောင်ကာ အိုဗားမားအားသွားရောက်ကြိုဆိုပြီး၊ အောက်ဖော်ပြပါ အိတ်ဖွင့်ပေးစာကိုရေး၍ မြန်မာနိူင်ငံ၏ နိူင်ငံ
ရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ဒီထက်ပိုမို အားကောင်းလာအောင် ထိထိရောက်ရောက် ပံပိုးမှုတွေလုပ်ပေးသွားရန် သမ္မတ
၊ အိုဗားမားမြန်မာနိူင်ငံသို့လာမည့်နေ့တွင် ထောက်ခံကြိုဆိုမှုပြုစေလို
ဒီအတွက် ကျနော်ရေးသားထားသော အိတ်ဖွင့်ပေးစာကို အင်္ဂလိပ်လိုလာသာပြန်ပြီး လိုအပ်လျှင်အသုံးပြုလို့ရကြောင်း
နှင့် လိုတိုးပိုလျှော့လုပ်လို့ရပါကြောင်း ( ဒါမှမဟုတ် ) မိမိတို့၏ သဘောထားဆန္ဒအရ အိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးပို့လိုက
ပေးပို့လို့ရပါကြောင်းနှင့် နိူင်ငံရေးအကျိုးအမြတ်များရရှိစေရန်အတွက် ကျနော့်အနေဖြင့် အကြံပြုတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
အမေရိကန်သမ္မတ မစ္စတာအိုဗားမားထံ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
ရက်စွဲ ။ ။ . ၁၁. ၂၀၁၂
( ၁ ) မစ္စတာအိုဗားမားအနေနဲ့ အမေရိကန်သမ္မတအဖြင့် ဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံအရွေးချယ်ခံရတဲ့အတွက်၊ အမေရိ
ကန် နိူင်ငံသူ/ သားများနှင့်ထပ်တူ ကျွန်ူပ်တို့မြန်မာနိူင်ငံရှိ ပြည်သူများမှ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မိပြီး၊ နှစ်ထောင်း
အားရကျေနပ်မိကြောင်း ဦးစွာပထမ ဂါရပြု နှုတ်ခွန်းဆက်လိုပါတယ်။
( ၂ ) အမေရိကန်သမ္မတ၏ မြန်မာပြည်ခရီးစဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ကျွန်ူပ်တို့ မြန်မာပြည်သူများမှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပြီး၊
ယနေ့ မြန်မာ့နိူင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ပိုမိုအား
ကောင်းလာအောင် ဒီထက်ပိုပြီး မြန်မာအစိုးရကို ဖိအားပေးမှုတွေပြုလုပ်သွားပြီး၊ လက်ရှိမြန်မာအစိုးရ၏ ဒီမိုကရေစီ
ပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအပေါ် လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်သို့ ရောက်ရှိလာစေရန် အိုဗားမားအစိုးရအနေနဲ့ သမ္မတဦးသိန်း
စိန်ဦးဆောင်တဲ့ အစိုးရနှင့် ဒု- ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ဦးစီးဦးဆောင်နေသည့် တပ်မတော်အား မိတ်ဖက်အနေဖြင့်
လက်တွဲခေါ်ဆောင်သွားသင့်ကြောင်း ကျွန်ူပ်တို့မှ အိုဗားမားအစိုးရကို လေးနက်စွာတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
( ၃ ) လက်ရှိ မြန်မာနိူင်ငံ၏ နိူင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွင် မြန်မာနိူင်ငံသို့လာရောက်သည့် သမ္မတအိုဗားမား အနေ
နှင့် သမ္မတဦးသိန်းစိန်နဲ့ တွေ့ဆုံတဲ့အခါသော်လည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များနှင့် တွေဆုံတဲ့အခါလည်း
ကောင်း၊ မြန်မာ့တပ်မတော်မှာထိပ့်တန်းခေါင်းဆောင်များနှင့် တွေ့ဆုံတဲ့အခါလည်းကောင်း၊ နိူင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ
လွတ်မြောက်ရေး၊ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများရပ်တန့်စေရေး၊ ပြည်တွင်းစစ်ရပ်ဆိုင်းရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ရခိုင်
ပြည်အတွင်းဖြစ်ပွါးနေသည့် ပဋိက္ခများအဆုံးသတ်ရေး၊ နယ်စပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ မြန်မာနိူင်ငံတွင် ပျက်စီးယိုယွင်းနေ
သည့် တရားရေးမဏ္ဍိုင်၊ ဥပဒေပြုမဏ္ဍိုင်၊ တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင်နှင့် ပညာရေးအဆောက်အအုံ၊ ကျမ္မာရေးအဆောက်အအုံ၊
လူ့မှုရေးအဆောက်အအုံများ ပြန်လည်ကောင်း မွန်လာအောင် သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များကို ဖိအားပေးမှုတွေပြုပေးပြီး
လိုအပ်သည့်အကူညီများနှင့် နည်းလမ်းကောင်းများကို ထိထိရောက်ရောက်ပံပိုးကူညီပေးစေလိုပါတယ်။
( ၄ ) မြန်မာနိူင်ငံ၏ နိူင်ငံရေးပြုပြင်ရေးတွင် မြန်မာ့တပ်မတော်၏ အခန်းကဏ္ဍ ပါဝင်ပတ်သက်မှုသည်၊ လက်ရှိ နိူင်ငံရေးဖြစ်စဉ်
ကာလတွင် လွန်စွာမှ အရေးပါနေသည်ကို သမ္မတအိုဗားမားအား အလေးနက်ထား၍သိစေလိုပါသည်။
( ၅ ) ထို့ကြောင့် မြန်မာ့နိူင်ငံ၏ နိူင်ငံရေးအပြောင်းလဲတွင် တပ်မတော်၏ အခန်းကဏ္ဍမှာ လွန်စွာမှ အရေးပါနေသည့်အတွက်
ကြောင့်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတပ်မတော်နှင့် မြန်မာ့တပ်မတော်တို့ နွေးထွေးသောထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများရရှိရန် များစွာလိုအပ်နေ
သေးကြောင်း၊ အမေရိကန်တပ်မတော်အနေဖြင့် မြန်မာ့တပ်မတော်အား ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ထိထိရောက်ရောက်
ပူးပေါင်းပါဝင်လာနိူင်ရန်အတွက် လက်တွဲခေါ်သွားနိူင်မှသာ မြန်မာနိူင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အကောင်ထည်ဖော်
သည့်အခါ ထိရောက်အောင်မြင်နိူင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကျွန်ူပ်တို့မြန်မာနိူင်ငံရှိ ပြည်သူများမှ အိုဗားမားအစိုးရကို အထူးတလှယ်သိစေ
( ၆ ) အမေရိကန်သမ္မတ၏ မြန်မာပြည်ခရီးစဉ်သည် မြန်မာ့နိူင်ငံ၏ နိူင်ငံရေးပြောင်းလဲမှုကို အကောင်းဆုံးအနေထားသို့ရောက်ရှိလာအောင် ဆောင်ကျဉ်းလုပ်ဆောင်ပေးနိူင်လိမ့်မည်ဟု ကျွန်ူပ်တို့မြန်မာပြည်သူများအနေဖြင့် ယုံကြည်ပါသည်။
( ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိူင်ငံသူ/ နိူင်ငံသားများ )
by Ko Balai Aung Soe on Thursday, November 15, 2012 at 3:03am ·